केसी र थापाद्वारा समयमै विधानसम्मत निर्वाचनको आग्रह, आचार्यद्वारा प्रतिनिधि विवाद समाधानको पूर्व अडान :: NepalPlus
केसी र थापाद्वारा समयमै विधानसम्मत निर्वाचनको आग्रह, आचार्यद्वारा प्रतिनिधि विवाद समाधानको पूर्व अडान
नेपालप्लस संवाददाता काठमाडौं२०७८ मंसिर २२ गते १८:३७
गैर आवाशिय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार कुल आचार्यले संघमा देखिएको प्रतिनिधि विवाद समाधान नभएसम्म यसै महिनाको अन्त्यमा हुने भनिएको निर्वाचनमा आफूहरु सहभागी नहुने बताएका छन । तर डा. बद्रि केसी र रबीना थापाले भने तोकिएको समयमा विधानसम्मत तरिकाले निर्वाचन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने “विवादहरु समाधान नगरि निर्वाचनमा जानु भनेको गैरआवाशिय नेपाली संघको भविष्यलाई धरापमा पार्नु हो ।”
पछिल्लो पटक उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछी संस्थापन पक्ष निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको छ भने निर्वाचन समितिले कार्यतालिका सहित मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । तर आचार्यले भने सहमती र छलफलबिनानै मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए ।
“राष्ट्रिय परिषदहरुले पठाएको नामावलीलाई बेवास्ता गरेर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई अध्यक्ष वा पदाधिकारी बनाउन गरिने निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदैनौं” उनले भने ।
‘के गर्नुहुन्छ ? तपाईंहरु चुनावमा नजाने, उनिहरुले चुनाव गराउने संघ फुट्छ अब ?’ भन्ने एक प्रश्नमा आचार्यले भने- “गैर आवाशिय नेपाली संघलाई अलग राखेर कसरी चुनाव हुन्छ भन्या ! गैर आवाशिय नेपालीहरुले होइन र भोट हाल्ने ? भोटरहरु नै सहभागी नभैकन कसरी निर्वाचन हुन्छ ?”
तर आचार्यले संघ टुक्रिने कुरालाई भने अस्विकार गरे । “हामीले संस्था किन फुटाउनु पर्‍यो ? हामी विधानका कुरा गर्छौं । गैर आवाशिय नेपाली संघको इमेज राम्रो बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । यदी कसैले विधिविधान विपरित गएर कुनै कृयाकलाप गरेको छ भने उसैले संघ फुटाउने चेस्टा गरेको छ । हो यस्तै कुरा हामीलाई स्विकार्य छैन ।”
“एनआरएन एउटा अभियान हो । यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउँछौं । हामीले संस्था फुटाउँदैन यदी कसैले फुटाउँछ भने त्यो जिम्मेवारी उसैको हुन्छ” उनले थपे । आचार्यले संस्थालाई बदनाम नगर्न पनि आग्रह गरे ।
बितेका सात महिना यता चुलिएको संस्थाको विवाद रोकिने अझै सम्म कुनै सम्भावना देखिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अदालतसम्म पुगेको यो अभियानको अन्तिम पटाक्षेप भनेको अन्तरिम आदेश थियो जसको आधारमा संस्थापना पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ ।
तर एउटा पक्ष बाहिर रहेर हुने निर्वाचनले संस्थाको भविष्य कस्तो होला भन्नेमा भने अन्योल नै छ । तथापी निर्वाचन समितिले अध्यक्षका तिनै जना प्रत्यासीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमामा ‘तपाईंले के भन्नु भयो ?’ भनेर हामीले अध्यक्षका एक प्रत्यासी डा. बद्री केसीलाई सोधेका थियौं । उनले आफूले भन्नुपर्ने खासै कुरा नभएको बताउँदै भने- “विधानअनुसार कार्य समितिले काम गर्न थालेको छ । निर्वाचन समितिले पनि काम गर्न थालेको छ । प्रतिनिधिका विषयमा विधान सम्मत रहेर काम गर्न अनुरोध गरेको छु ।”
छलफलमा अध्यक्षका तिनै जना प्रत्यासीले आफ्ना भनाई राख्दै अहिले चलेका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
डा. बद्री केसी र रविना थापाले विधान सम्मत रहेर समयमै निर्वाचन गराउन आग्रह गरेका थिए । आचार्यले भने प्रतिनिधिहरुको विवाद समाधान नभएसम्म आफूहरु निर्वाचनमा सामेल नहुने र निर्वाचन नगराउन आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचनको मिती नजिकिंदै गएपछी निर्वाचन समितीले सबैसँग छलफल अगाडि बढाएको छ भने संस्थालाई एक बनाएर लैजान पूर्व अध्यक्षहरुले पनि अन्य उपायहरुका बारेमा छलफल अगाडि बढाएका छन् ।